ọla kọpa / Aluminum tube serpentine Bender - BOBO Machine Co., Ltd.
ọla kọpa / Aluminum tube serpentine Bender
The rotary table ụdị ọla kọpa / aluminum tube serpentine Bender na ọtụtụ-eji maka condenser, evaporator tube ekwe usoro. Tụlee na omenala ntuziaka ekwe ọrụ, na ọkara akpaka ekwe igwe nwere ike hazie ruo 10-12 grouped akpa n'otu oge ekwe dị ka dị iche iche tube n'obosara, ọrụ arụmọrụ na-ihe ndị ọzọ kwalite, na okokụre tube ọnọde ọma anya dị ka kwa chọrọ.
1. Patented pụrụ iche e mere servo akara ekwe usoro maka dị iche iche ekwe direction na-ekwe n'akuku na kpọmkwem size. (Patent Mba: zł 2011 1 0092227.X)
2. Patented pụrụ iche e mere na-ekwe ngwaọrụ hụ kpọmkwem ekwe okirikiri, obere deformation na ezi ọdịdị (Patent Mba: zł 2011 2 0107426.9)
3. patented pụrụ iche e ekwe Ọdịdị ana achi achi mụ arụmọrụ ruo 10-12 grouped akpa ke kiet ke otu oge. (Patent Mba: zł 2009 2 0013741.8)
4. Servo mbanye usoro, PLC akara usoro, na ihuenyo mmetụ akara na-elu kpomkwem ngwaahịa size na mfe ime ihe na mmezi.
5. Ekwekọghị na akpaka tube chipess ịkpụ ogologo igwe, na ọkara akpaka serpentine Bender na-ewe nnukwu mmepụta ike na obere mmejọ na ntipịa.
uzuzu mkpuchi /
OA / FC
OA / CCC
IV Main ụzụ data
Ọla kọpa tube / aluminum tube
Tube Wall ọkpụrụkpụ
1-5 PC / okirikiri
1~ 180 ogo
ruo 110 ugboro / okirikiri
0-700mm / oge, max. 3 ugboro
Rotary Isiokwu Size
PLC akara / Ihuenyo mmetụ aka
380V, 50Hz, 3Phae (ahaziri)
3000 x 1300 x 1680 mm (ekwe Isiokwu)
price gbadoro: FOB Shanghai, China.
Ịkwụ ụgwọ okwu: 30% ịkwụnye site T / T, itule site T / T mgbe nnyocha tupu Mbupu.
Oge Mbuga ozi: 45 ụbọchị ke ama ọkọbọ nkwụnye ego
Ọnụahịa otu: USD19,880
VI Nkwa na na mgbe-ire ọrụ
Anyị na-enye free ọzụzụ ebe a na China. Ọzọkwa anyị ga-eziga technicians oversea maka dum akara echichi na ọzụzụ. The mkpa eri tinyere Visa, insurance, gburugburu elu tiketi, ọrụ na-eri na ulo ga bunyere site na asịwo
The nkwa oge bụ otu afọ ebe ọ bụ na ụbọchị B / L. N'oge a, anyị ga-enye free akụkụ maka na-agbanwe agbanwe ma ọ bụrụ na igwe quality nsogbu. Ọzọkwa mapụtara akụkụ nwere ike e nyere na mbụ na-eri mgbe. The ibu maka akụkụ-eziga a ga-akwụ site na asịwo.
Mgbanwe Aluminium duct Ime Machine
Two-akara capillary tube Cutting Machine
Automatic n'akuku Steel Flange Ime Machine
Duct Manufacturing Auto-akara III